Hery Rajaonarimampianina tany Rosia : Nisy ny fihaonana tamin’ny Vladimir Poutine -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina tany Rosia : Nisy ny fihaonana tamin’ny Vladimir Poutine
06/03/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina tany Rosia
izay mbola nitohy hatrin’ny omaly, dia fantatra izao fa nisy ny fihaonany tamin’ ny filoham-pirenena Rosianina Vladimir Poutine. Io fihaonana io izay niarahan’ny roa tonta niresaka mikasika ny fifanakalozana sy ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny ara toe-karena eo amin’ny firenena roa tonta. Ankoatra izany dia mbola nisy ihany koa ny tafa izay niarahan’ny filoham-pirenena malagasy tamin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny Rosianina, izay nanamafisan’ny roa tonta ny fiaraha-miasa izay azo tanterahina.
Raha tsiahivina moa dia nisy ny fampahafantarana ny Vina Fisandratana 2030 tany Rosia, izay tetikasa entina hampandrosoana maharitra an’i Madagasikara. Raha tsiahivina ihany koa moa nandritra ity dian’ ny filoha tany Rosia ity, ankoatra ny fihaonany tamin’ ny filoha rosianina sy ny minisitry ny Raharaham-bahiny tany an-toerana, dia mbola nisy ihany koa ny fandraisan’ireo manam-pahaizana ambony ara-toekarena tao amin’ny Oniversiten’ny “Amitié de Peuple” ao Russie koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nandritra izany no nanoloran’izy ireo ny laharam-boninahitra fanomen’ny Oniversité ireo olo-miavaka, ny docteur Honoris Causa amin’ny “Sciences Economique”. Delegasiona niaraka tamin’ny Filoha tamin’izany raha tsiahivina dia ny minisitra Marcel Benjamina Ramanantsoa
( Mepate) , ny minisitra Ying Vah Zafilahy , minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika, ny minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana Edmond Randriarimanana, ary ny mpanolotsaina manokana, Mbola Rajaonah.
Tsy misy izay tsy vaky vava ankehitriny noho ny ataon’i Marc Ravalomanana, filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara na Tim. Nanoloana ny zava-nitranga, ny sabotsy 8 jolay teo, izay saika nankalazan’ny antoko Tim ny faha-15 ...Tohiny
Vondrona Afrikanina – Eraopeanina : Hanampy tosika ny tanora
« Permis de construire » – CUA:Mamita-bahoaka…